13 Qof Ee Ugu Mushaharka Badan Dunida | Faallooyinka ugu Fiican | Shaqooyinka
Bogga ugu weyn 13 Qof Ee Ugu Mushaharka Badan Dunida | Faallooyinka ugu Fiican
Dad badan ayaa la yaabay inay ogaadaan in alxanka uu yahay mid ka mid ah xirfadaha ganacsiga ugu mushaharka badan dalka. In kasta oo, dadku doorbidaan xirfadaha caafimaadka, sharciga, xisaabaadka, iyo jagooyinka kale ee xafiisyada, alxanka waa shaqo faa'iido badan leh oo baahi weyn loo qabo. Welders waxay si joogto ah ugu safraan adduunka oo dhan.
Ma waxaad tahay shaqsi xirfad leh oo waliba jeclaan lahaa inuu ku safro adduunka? Doorashada xirfadda alxanka ayaa kuu noqon karta ikhtiyaar aad u fiican maxaa yeelay hadda, waxaa jira welders -ka ugu mushaarka badan adduunka oo ku raaxeysta oo wax ku barta adduunka oo dhan. Alxanka ma aha qof walba, laakiin kuwa jecel, waxaa laga yaabaa inay tahay shaqo faa'ido badan oo buuxisa.
Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu ku dhibi doonaa welders -ka ugu mushaarka badan adduunka iyo shaqooyinka alxanka.
Waa Maxay Alxanka?
Alxanka wuxuu noqon karaa shaqo walwal leh sida shaqooyinka kale ee goobta laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo laga barto mihnadda. Qaar ka mid ah alxanka khabiirada, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in loo xilsaaro inay la shaqeeyaan NASCAR (National Association For Stock Car Autoracing) shaqaalaha godadka tartanka si ay u dayactiraan una dhisaan qalabka tartanka ee gaarka ah.
Shaqooyinka alxanka biibiilaha ayaa laga yaabaa inay u baahdaan alxanleyaasha inay u safraan meelo fog fog si loo rakibo ama loo dayactiro nidaamyada dhuumaha. Inta lagu jiro mashruuca, waxay ku noolaan karaan meelo fog fog Alaska, Canada, ama Saxaraha Saxaraha.
Alxanka waa doorasho xirfadeed oo weyn oo loogu talagalay dadka ku raaxaysta inay ku shaqeeyaan gacmahooda, oo farsamo ahaan u jihaysan, oo ka mahadnaqaya inay ku biiriyaan tayadooda dhismaha dhisme, mashruuc, ama qaab dhismeed. Alxanka waa shaqo aan u baahnayn shahaado jaamacadeed.
Welders waxay heli karaan shahaado ugu yaraan sagaal bilood gudahood waxayna bilaabi karaan kasbashada dakhli ixtiraam leh. Welders-ka waxaa lagu qiimeeyaa kartidooda, xirfadaha badankooduna waxay u baahan yihiin inay ka gudbaan imtixaanka gacmo-qabashada.
Waxyaabo kale oo alxanka ka dhigay xirfad wanaagsan waa fursad aad ugu safarto adduunka oo dhan.
Shaqooyinka alxanka ayaa sidoo kale loo kala saaray meelo kala duwan sida kormeerka, injineernimada, robotics, iyo iibinta.
Sidoo kale, mustaqbalka, welders -ka ayaa had iyo jeer loo baahan doonaa ilaa iyo inta ay jirto baahida loo qabo tamar, quwadda nukliyeerka, iyo qodista adduunka oo dhan.
Alxanka waa xirfad mar walba baahnaan doonta marba haddii ay jirto bir ay tahay in lagu xiro bir kale. Haddii aad shaqo ka raadinayso aag ama meel kale, waxay sii wadi doonaan inay ku siiyaan furitaanno meelo kala duwan oo dalka oo dhan ah.
Baahida loo qabo alxanleydu weligeed way sarreysay. Wax farqi ah ma sameyneyso waxa dhaqaaluhu sameeyo marba haddii ay jirto warshado horumar leh.
Walder ahaan, waad beddeli kartaa warshadaha adiga oo aan beddelin xirfadaha wakhti kasta. Waxaa jiray hoos -u -dhac dhaqaale sanadihii la soo dhaafay oo saameeyay shaqooyin badan, laakiin alxanleydu waxay si fudud ugu guureen meherad dhisidda maraakiibta.
Dadku waxay kaloo rumaysan yihiin in biraha sida habboon loo xardhay ay ka xoog badan yihiin, ka fudud yihiin, kana jaban yihiin wax -soo -saarka marka loo eego dhismayaasha birta ee la xannibay. Natiijada fikraddan awgeed, warshadaha ayaa bilaabay inay doortaan alxanka si ay u xiraan Dhab ahaantii, qaar ka mid ah shaqooyinka alxanka ayaa bixiya isla kuwa dhakhaatiirta.
Intee in leeg bay alxamayaashu sameeyaan?
Waa muhiim inaad weydiiso su'aalaha sidan oo kale ah, gaar ahaan haddii aad rabto inaad raacdo xirfadda alxanka. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo jawaab sax ah laga helayo su'aashan ayaa noqon karta mid aan caddayn, sidoo kale waa sahlan tahay in laga jawaabo haddii erayga "alxanka" la yareeyo.
Welder waa eray guud oo loo isticmaalo in lagu tilmaamo kuwa isku xira biraha. Injineernimada, robotics-ka, kuwa wax dhisa markabka, kuwa biibiileyaasha ah, iyo xirfadaha kale ee alxanka la xiriira ayaa hoos yimaada dalladda alxanka
Magdhawga sanadlaha ah ee alxameeyuhu wuxuu ka bilaabmaa $ 28,560 oo ah shaqada heerka gelitaanka. Welders waxay kasbadaan magdhaw dhexdhexaad ah $ 41,380 gudaha Mareykanka, iyadoo boqolkiiba 90 ugu sarreeya mushaharkoodu yahay $ 63,740.
Socdaalka shaqooyinka alxanka, iyo sidoo kale shaqooyinka alxanka ee ka dhaca deegaannada khatarta badan leh, sida ceelka shidaalka ayaa si fiican u bixiya.
Markaad safraysid, alxanka tuubooyinka warshadaha ayaa laga yaabaa inay kasbadaan meel kasta $ 50,000 ilaa $ 185,000 sanadkii. Alxanleyda taageerada milatariga waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 160,000 sanadkii.
Alxanka, si ka duwan xirfadaha kale qaarkood oo dad badani aaminsan yihiin inay leeyihiin awood kasbasho oo liidata, ayaa leh awood kasbasho oo sarreysa. Waxaad kasban kartaa inta qareen ama dhakhtar, haddii aysan ka badnayn.
Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha, celceliska magdhawga sanadlaha ee alxanka waa $ 42,000 oo doolar. Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha, boqolkiiba 50 welders -ka Mareykanka ayaa qaata wax ka badan intaas, halka boqolkiiba 50 ay helaan wax ka yar.
Suuragal ma tahay in Waardiyayaashu Sannad 100k Sameeyaan?
Runta ayaa wali jirta in shaqooyinka alxanka ee bixiya in ka badan $ 100K ay jiraan.
In kasta oo ay jiraan doodo ku saabsan runtaan, dooddu run uma aha dhammaan shaqooyinka alxanka. Waxaa jira shaqooyin alxanka ugu mushaarka badan oo bixin kara $ 100k.
Alxanka waa xirfad cajiib ah oo awood kuu siineysa inaad gacmahaaga ku shaqeyso oo aad ku safarto adigoo weliba lacag badan helaya. Waxaad kasban kartaa $ 100,000 ama ka badan sanadkii waxaadna ku raaxaysan kartaa waxaad samayso haddii aad hesho shaqada alxanka ugu fiican.
XIDHIIDHKA: SIDA LOOGU HELO DHISMAHA ARDAYDA DOBE 2022
Welders -ka ku shaqeeya qandaraaska waxay kasban karaan si ka badan $ 100,000 sanadkii.
Alxanka taageerada milatariga, alxanka badda hoosteeda, alxanka nukliyeerka, alxanka birta, iyo alxanka dhuumaha warshadaha ayaa ah qaar ka mid ah shaqooyinka alxanka ee bixiya $ 100,000.
Marka, ma u malaynaysaa inay suurtogal u tahay in alxanleydu kasbadaan $ 100,000 sannad kasta? Si kastaba ha ahaatee, waxay ku xiran tahay alxanka alxanka aad doorato. Sii wad akhrinta haddii aad rabto inaad sii wadato xirfadda alxanka oo aad rabto inaad wax ka barato shaqooyinka alxanka oo mushaharkoodu sarreeyo.
Waa kuwee Dalku wuxuu Bixiyaa Welders ugu Badan?
Marka la barbardhigo waddamada kale ee si fiican u bixiya alxaanta, Switzerland waxay magdhaw siisaa alxannadeeda halkii ay ka ahaan lahayd mid wanaagsan. Waxay kasbadaan CHF 115,000, oo aad u badan xitaa marka la beddelo. Noorway, dadka ayaa si joogto ah magdhaw loogu siiyaa maalinta.
Si kastaba ha ahaatee, arrimo kala duwan ayaa saameeya sida welders -ka magdhaw loogu siiyo waddan kasta. Goobta, meesha alxanka, saacadaha shaqada, faa'iidooyinka, iyo tixgelinno kale ayaa ka mid ah.
Marka, aan eegno sida ay dalal kala duwan u magdhabaan alxanka.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Maraykanka waa $ 43,000.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Kanada waa $ 41,000.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Boqortooyada Ingiriiska waa $ 33,000.
Norway waxay bixisaa $ 48,000 sanadkii.
Australia, celceliska mushaharku waa $ 55,000, halka Switzerland, magdhawga celcelis ahaan uu yahay $ 72,000.
Sida Loo Noqdo Alxanle
Iyada oo ku xidhan dugsiga aad dooratay, tababarka alxanka ayaa laga yaabaa inuu qaato meel kasta laga bilaabo 7 bilood ilaa 2 sano oo tababar gacmeed ah. Welders -ku waa farsamayaqaan aad u tababaran oo aqoon u leh.
Welders -ka ayaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan warshadaha baabuurta, dhisidda maraakiibta, dhismaha dhismaha, ama meherad kasta oo wax soo saar.
Haddii aad ku raaxaysato shaqo farsamo oo u baahan in aad samayso ama dayactirto badeecado gaar ah, alxanka ayaa noqon kara shaqada kugu habboon. Alxanka, oo ku lug leh adeegsiga aaladaha qalafsan iyo ololka, waxay qaadataa khibrad iyo tababar badan si loogu guuleysto goobta.
Kaddib uruurinta macluumaadka iyo waayo -aragnimada, welders -ku waxay sii wadi karaan inay ballaariyaan xirfaddooda. Tani waxay u saamaxaysaa inay hore u mariyaan xirfaddooda oo ay dhammaystiraan mashaariic waaweyn.
Marka, haddii xiisahaagu u korayo xagga alxanka, raac tallaabooyinka soo socda si aad u noqotid alxanle xirfad leh oo shahaado haysta. Tallaabooyinkan waxaad ku noqon kartaa alxanleyaasha ugu mushaharka badan shaqooyinka alxanka.
1. Baadh Noocyada Kala duwan ee Xirfadaha Alxanka.
Tallaabada ugu horreysa waa inaad wax ka barato xulashooyinka badan ee alxanka ee aad heli karto. Tani waxay kaa caawin doontaa go'aaminta shaqooyinka alxanka shaqooyinka iyo mas'uuliyadaha ugu habboon awooddaada.
Tababarro kala duwan ama shahaadooyin ayaa looga baahan yahay xirfadaha alxanka ee kala duwan sababtoo ah waajibaadka kala duwan.
Baadhitaanka mas'uuliyadaha kala duwan ee shaqo kasta oo alxanka u baahan waxay kaa caawin kartaa go'aaminta nooca waxbarashada iyo tababarka aad dooranayso.
2. Isku qor fasallada alxanka
Soo ogow shuruudaha waxbarasho ee looga baahan yahay xirfadda alxanka ee aad rabto inaad raacdo. Dibloomada dugsiga sare ayaa looga baahan yahay inta badan shaqooyinka alxanka. Qaado casharo alxanka haddii dugsigaaga sare siiyo iyaga si ay wax badan uga bartaan qaababka badan ee alxanka.
Sababtoo ah alxanka mararka qaarkood wuxuu u baahan yahay cabbir cabbir, sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad qaadato fasallada xisaabta ee dhammaystira alxanka, sida joometeriga.
3. Helitaanka Liisanka Alxanka
Waxaad sii wadan kartaa waxbarashadaada ka dib markaad ka qalinjabiso dugsiga sare adoo iska diiwaangelinaya barnaamijyada shahaadada alxanka.
Barnaamijyada shahaadooyinka alxanka badanaa waxay u dhexeeyaan lix ilaa laba iyo toban bilood. Waxay kaa caawin kartaa ballaarinta fahamkaaga alxanka.
Qaar ka mid ah alxanleyda ayaa dooran kara inay sii wataan waxbarashadooda oo ay helaan Shahaadada Bachelor -ka ee Welding, iyadoo ku xiran takhasuskooda.
4. Samee Khibrad Wax -ku -ool ah
Waxaad ku bilaabi kartaa tababar gacmeed tababar barasho oo ku saabsan nooca saxda ah ee alxanka aad rabto inaad raacdo isla marka aad hesho shahaadada welder.
Waxaad samayn kartaa shaqo kormeer ah oo qayb ka ah tababar barasho si aad wax badan uga ogaato jadwalka caadiga ah ee alxanka.
Ka dib markaad dhammaysato tababar-xirfadeedkaaga, waxaad go'aansan kartaa inaad la joogto shirkadda aad ku samaysay tababarkaaga haddii ay oggolaadaan, ama waxaad ku dabaqi kartaa xirfadahaaga shaqo cusub oo alxanka oo buuxa ah.
5. Hesho Shahaado
Baro sida loo xiro oo loo helo shahaado.
Waxaad u baahan doontaa inaad haysato shahaado nooca alxanka aad rabto inaad samayso ka hor intaadan bilaabin shaqada.
Welders -ku waxay heli karaan shahaadooyin kala duwan, oo ku salaysan xirfaddooda iyo shaqada alxanka ee la rabo. Shahaadada aasaasiga ah ee AWS Certified Welder waa tan ay ganacsiyada badankoodu u baahan doonaan.
Si aad u hesho shahaadadan, waa inaad ku gudubtaa imtixaan, kaas oo laga heli karo tiro ka mid ah Xarumaha Imtixaanka Aqoonsiga AWS.
Si aad u qaadato imtixaankan, looma baahna wax shuruudo ah. Waxaa ku jiri doona qayb qoran iyo sidoo kale tijaabinta aqoontaada alxanka.
6. Bilow raadinta shaqo.
Waxaad bilaabi kartaa raadinta shaqooyinka alxanka marka aad dhammayso waxbarashada loo baahan yahay, tababarka, iyo waayo -aragnimada. Si aad u hesho shaqooyin u dhigma kartidaada ama khibradaada hadda, ka raadi xayaysiisyada shaqada internetka.
Awoodahan waxaa laga yaabaa in lagu muujiyo CV -gaaga. Samee liis cad oo cad xirfad kasta oo aad ku kasbatay khibradaada shaqo.
Xirfadahaaga ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku qoran yihiin qayb gaar ah oo resumeygaaga ah. Markaad ku jirto resumeygaaga, isku day inaad iftiimiso kartida ku qoran dhajinta shaqada.
Tallaabooyinkan ayaa kuu keeni kara shaqooyinka alxanka ugu mushaarka badan.
13 Xirfadood ee Ugu Mushaharka Badan Dunida
Waa suurtogal in la sameeyo in ka badan $ 100k alxanka. Waa muhiim inaad diirada saarto jagooyinka alxanka ugu mushaharka badan ganacsiga haddii aad rabto inaad samayso $ 100,000.
Waxaa laga yaabaa inaad kordhiso fursadahaaga inaad samaysato $ 100,000 alxanka adiga oo xoogga saaraya shaqooyinka alxanka ugu mushaharka badan.
Alxanleyaasha taageerada milatariga, alxanka badda hoosteeda, alxanka tuubooyinka, alxanka nukliyeerka, iyo alxanleyaasha milkiilaha ganacsiga ayaa ka mid ah xirfadaha alxanka ugu mushaharka badan.
Waa kuwan qaar ka mid ah 13 alxanle ee ugu mushaharka badan shaqooyinka alxanka ee adduunka.
1. Rig Welder (Mushaharka Sannadlaha ah: $52,000-$207,000)
Welders-ka ka shaqeeya riigagga ayaa ka mid ah shaqaalaha ugu mushaharka badan meeraha ee shaqooyinka alxanka. Waxay haystaan ​​waxbarashada iyo shahaadooyinka ugu horumarsan waxayna shaqeeyaan saacado dheer oo adag.
Waxay noqon doontaa masiibo haddii ay khalad sameeyaan, markaa shirkaduhu waxay kaliya u kiraystaan ​​kuwa ugu wanaagsan doorkaas.
Shirkaduhu waxay kaliya kuu tixgelin doonaan jagada haddii aad leedahay khibrad sannado iyo shahaadooyin kala duwan. Goobaha shidaalka ee ku yaal badda, alxanka riigyada ayaa badanaa la filayaa inay sameeyaan biyaha hoostiisa alxanka, alxanka hyperbaric, iyo qaababka kala duwan ee alxanka.
Read Waa Kuwee Kuwa Ugu Sarreeya Bixiyaasha Biyaha? | Dalalka ugu sarreeya 2022 -ka
2. Alxanka Dhuumaha Warshadaha ($ 55,000 - $ 175,000)
Welders -ka ka shaqeeya dhuumaha ayaa dhisa oo dayactira dhuumaha birta ee waaweyn ee gudbiya saliidda iyo gaaska dabiiciga ah. Dhuumahaasi waxay noqon karaan boqolaal kiilomitir oo waa inay ahaadaan kuwo aad u waara si looga fogaado daadad.
Alxanka dhuumaha ayaa adag maadaama tuubbooyinku ay go'an yihiin oo aan la dhaqaajin karin, sidaa darteed alxanka waa inuu awood u yeeshaa inuu ku shaqeeyo qaabab kala duwan oo qallafsan si uu u gaaro gobolka ay u baahan yihiin inay alxamaan.
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka alxanka ugu mushaarka badan.
3. Walder -ka biyaha hoostooda (Mushahar Sanadeed: $ 38,000 - $ 147,000)
Welders ka shaqeeya biyaha hoostooda ayaa la kulma khatar badan. Dhab ahaantii, tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan ee laga yaabo inaad qabto, iyadoo ay aad uga badan yihiin dhimashada goobaha shaqada marka loo eego inta badan shaqooyinka kale.
Taasi waa, dabcan, qayb weyn oo ka mid ah sababta mushaarka badan loo siiyo. Xeebaha, alxanka biyaha hoostooda ayaa ka shaqayn kara mashaariic kala duwan.
Waxaa laga yaabaa inay dhisayaan ama dayactirayaan goobaha shidaalka iyo dhismayaasha kale ee la xiriira saliidda, ka soo kabashada burburkii maraakiibta, ka shaqeynta dhismaha biyaha hoostooda, ama qabashada hawlo kale duwan oo kala duwan oo iyaga kaliya ay awoodaan.
Waxay ka mid yihiin Daryeeleyaasha Lacagta ugu sarreeya.
4. Welder Nuclear (Mushahar Sanadeed: $ 22,000 - $ 143,500)
Alxannada nukliyeerka waxay fuliyaan waajibaadyo kala duwan oo keena aqoonsiyo kala duwan.
Waxaad u baahan doontaa in laguu caddeeyo sidii alxanle biyaha hoostooda ah iyo quusiye ganacsi. Laakiin sharuudaha aan caadiga ahayn ee shaqadan ayaa ah in FBI-da lagaa saaro!
Si aad uga shaqeyso agabyada nukliyeerka ee alxanka nukliyeerka ay tahay inuu ka shaqeeyo, waa inaad haysataa caddeyn xagga amniga ah.
Intaa waxaa dheer, waxaa hubaal ah inaad ka gudbi doonto qiimaynta cilmi -nafsiga iyo sidoo kale tijaabooyinka daroogada iyo aalkolada ee soo noqnoqda. Waa hab nololeed oo dalbanaya oo aan qof walba u baahnayn.
Waxaad ka shaqayn kartaa maraakiibta ku shaqeeya nukliyeerka, dhisi kara ama dayactiri kara maraakiibta falcelinta, ama ka shaqayn kara meelaha maraakiibta sida alxanka nukliyeerka.
5. Taageerayaasha Ciidanka (Mushahar Sanadeed: $ 37,000 - $ 160,000)
Ma aha wax la yaab leh in ka shaqaynta aagga colaaddu ay lacag fiican bixiso. Dhismaha iyo dayactirka saldhigyada ciidamada looga baahan yahay adduunka oo dhan, una baahan baahida shaqaale tababaran.
Markaad caafimaadkaaga iyo badbaadadaada geliso khadka meel dagaalladu ka dhacay, dakhligaagu wuxuu kor u qaadi doonaa khatarta.
Waxa kale oo lagugu qasbi doonaa inaad ku biirto militariga, taas oo aan ahayn wax qof walba doonayo inuu sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagugu abaalmarin doonaa faa'iidooyin aad u fiican iyo xitaa magdhow ka sii fiican.
6. Injineerka Alxanka (Mushahar Sanadeed: $ 51,000 - $ 120,000)
Inaad u shaqeyso sida injineer alxanka waxay sababtaa rabitaan waxbarasho sababtoo ah waxaa lagaa doonayaa inaad la socoto hababka alxanka ee ugu dambeeyay iyo kan ugu weyn mar walba.
Waxaad u baahan doontaa inaad ku darto horumaradan dhow shirkadaha aad u shaqeyso, adoo adeegsanaya aqoontaada si aad u horumariso nidaamyada hadda jira si aad uga dhigto kuwo hufan oo kor loogu qaado heerka guud ee waxqabadka shirkaddaada.
Si aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa shahaadada bachelorka iyo shahaadada AWS.
Tani waa mid ka mid ah Daryeelayaasha Lacagta ugu sarreeya iyo shaqooyinka alxanka.
7. Kormeeraha Welding Certified (Mushahar Sanadeed: $ 42,000 - $ 104,000)
Alxanka waxaa laga yaabaa in aan looga baahnayn in uu sameeyo kormeeraha alxanka. Waxaad u baahan doontaa inaad ka ogaato si ka fiican mid kasta oo ka mid ah alxanleyda shirkaddaada, in kastoo, sababtoo ah waxaad hubin doontaa in wax kasta oo ay sameeyaan ay yihiin ilaa heer.
La soco qiyamka kulaylka, hubi in dhammaan alxanka ay raacayaan u hoggaansanaanta iyo xeerarka badbaadada, oo hubi in dhammaan habraacyada ay ku dhammaadeen heer lagu qanco.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad taqaan oo aad fahanto halbeegyada habka alxanka.
Kahor intaadan qaadan imtixaanka shahaadada, waxaad u baahan doontaa saddex sano oo waayo -aragnimo alxanka ah.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Goynta Dheemanka ugu Qaalisan?
8. Qaboojiyaha Biibiilaha (Mushahar Sanadeed: $ 35,000 - $ 100,000)
Alxanka tuubooyinka waxaa laga shaqaaleysiin doonaa shirkado kala duwan, kaliya maahan warshadaha saliidda iyo gaaska.
Waxaad ka shaqayn kartaa tusaale ahaan warshadaha baabuurta, dhisidda maraakiibta, ama dhismaha.
Waxaad u baahan doontaa shahaadada AWS, laakiin loo-shaqeeyahaagu wuxuu u badan yahay inuu ku siiyo tababar shaqo.
9. Combo Welder (Mushahar Sanadeed: $ 32,000 - $ 82,000)
Alxanleyda Combo waxay leeyihiin takhasus hoose oo ka hooseeya xirfado badan oo alxanka oo lacag badan leh.
Waxaad u baahan doontaa inaad xirfad u leedahay farsamooyinka alxanka ee kala duwan, oo ay ku jiraan MIG (Gaaska Birta Inert), TIG (Tungsten Inert Gas), Stick, iyo ARC.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad safar dheer u gasho iyadoo ku xiran cidda aad u shaqeyso. Sababtoo ah alxanayaasha combo waxaa lagu shaqaaleysiin karaa meelo kala duwan, shirkaddaadu waxay si weyn u saameyn doontaa mas'uuliyaddaada.
Waxaa lagaa filayaa inaad fuliso waajibaadyo kala duwan, waxaad u baahan doontaa dhowr sano oo khibrad ah ka hor inta aan laguu qorin sidii alxanka koombo.
Waa mid ka mid ah shaqooyinka alxanka ee ugu sarreeya.
10. Kormeeraha Alxanka Shahaadaysan (Mushahar Sannadeed: $ 38,000 - $ 75,000)
Wax walba adiga ayay kugu xiran yihiin sida kormeere alxanka oo tababaran. Waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in dhammaan alxamayaasha shirkaddaadu ay u hoggaansamaan heerarka tayada, waqtiyada kama dambaysta ah, iyo xeerarka amniga.
Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona alxanka oo dhan, markaa hubso in qof walba shaqadiisa si habboon u qabto.
Mid ka mid ah welwelkaaga ugu weyni waa badbaadada, waana inaad si dhow ula socotaa qof walba si aad u hubiso inay raacaan xeerarka. Si kastaba ha noqotee, haddii jadwalka wax -soo -saarka aan la buuxin, adiguna adiga ayaa mas'uul ka ah.
11. Aerospace Welder (Mushahar Sanadeed $ 37,000 - $ 69,000)
Welders -ka warshadaha aerospace waxay kasbadaan waxyar in ka badan celceliska alxanka, laakiin uma badna inta aad filan karto.
In kasta oo xaqiiqda ah in tani ay tahay shaqo alxanka oo aad u takhasusay oo leh dulqaad aad u adag, halista dhimashada ama dhaawaca ayaa xaddidan, oo waxaa lagugu qasbi doonaa oo keliya inaad safarto marar dhif ah, weli ma aha mid ka mid ah kuwa ugu mushaarka badan berrinka.
Haddii aad rabto xasilloonida xoogaa shaqo caadi ah oo leh mushahar ka sarreeya, tani waa takhasus aad u baahan tahay inaad eegto.
12. Warshadaha alxanka (Mushahar Sanadeed $ 26,000 - $ 74,500)
Alxanleyda waxsoosaarka ayaa u xilsaaran dayactirka ama been abuurka alaabada cusub iyagoo alxanka ka kooban qaybo bir ah oo noocyo iyo cabbirro kala duwan leh.
Sababtoo ah tayada alaabta birta ah iyo qalabka waxaa lagu go'aamiyaa sida wax ku ool ah ee qayb kasta loo isku daro, doorka alxanka warshadda ayaa muhiim u ah habka wax soo saarka.
13. Alxanka Dhismaha (Mushaharka Sannadlaha ah $36,000-$58,500)
Alxanleyaasha qaab-dhismeedku waa inay naqshadeeyaan oo dhisaan qaabka birta ee dhismayaal kala duwan, oo ay ku jiraan buundooyinka iyo dhismooyinka dhaadheer.
Waxay kaloo mas'uul ka yihiin hagaajinta iyo isku -darka qaybaha birta sida dogobyada iyo tiirarka.
Sida alxamayaasha kale, alxanleyda qaabdhismeedku waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan faahfaahinta oo ay noqdaan kuwo jir ahaan wanaagsan.
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo oo ku saabsan Xannaaneeyayaasha ugu sarreeya.
Xagee alxamayaashu ka helaan lacagta ugu badan adduunka?
Welders -ka Switzerland si cadaalad ah ayaa loo magdhabaa. Waxay kasbadaan CHF 115,000, oo ah lacag la taaban karo xitaa marka la beddelo.
alxanka miyaa shaqo cajiib ah?
Haa, alxanka waa xirfad fantastik ah maxaa yeelay uma baahna shahaadada qalin -jabinta barnaamijyada tababarkana aad bay u gaaban yihiin.
Intee ayuu sameeyaa alxanka dhuumaha?
Celceliska mushaharka sanadlaha ee Bixiyaha Pipeline ee Mareykanka waa $ 69,841 laga bilaabo Luulyo 20, 2021.
Immisa ayuu alxanka sameeyaa saacaddii?
Celceliska magdhawga saacadlaha ee Welder -ka Mareykanka waa $ 17.73 saacaddiiba laga bilaabo Luulyo 20, 2021.
Alxanleydu ma hodan yihiin?
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha, alxanleyda boqolkiiba 90 ee dakhliga waxay kasbadaan $ 63,000 sanadkii canshuurta kahor.
Alxanle ma samayn karaa $ 100K?
Waxaa suurtogal ah in 100k lagu sameeyo alxanka oo leh waayo -aragnimo sax ah, u -qalmitaan, qalab, iyo xaalado.
Ma adag tahay in aad noqoto alxanka?
alxanka waa farsamo gacanta lagu hayo oo ku lug leh in ka badan si fudud wax loo akhriyo, sidaas awgeed waa dhexdhexaad ilaa aad u adag in la barto dadka badidood. Intaa waxaa dheer, dadka intooda badan waxay u arkaan alxanka inuu yahay mid aad u adag in dhab ahaantii la fuliyo sababtoo ah waxay u baahan tahay sanado khibrad ah marka laga reebo barashada sida loo sameeyo.
Doorashada xirfadda alxanka si toos ah uma tilmaamayso guul dhaqaale. Waxay u baahan tahay dadaal badan, xirfad, karti, iyo karti. Markaa, intaad helayso khibrad, waxaad wali ka shaqayn kartaa sidii aad u heli lahayd nolol habboon ama aad u aasaasto shirkad kuu gaar ah.
Waa kuwan waxyaabo ay tahay in la xasuusto haddii aad rabto inaad ka mid noqoto alxanayaasha ugu mushaharka badan adduunka. Markasta oo ay badato khatarta aad diyaar u tahay in aad aqbasho, waxa badanaya mushaharkaagu.
Sidoo kale, mar kasta oo aad gurigaaga ka maqnaato, lacag badan ayaa soo gasho.
Xirfadaha sare, waxbarashada, iyo shahaadooyinka ayaa sidoo kale ku heli doona lacag badan, laakiin samaynta waxa kor ku xusan oo dhan waa habka ugu weyn ee lagu kasbado lacagta ugu badan sida celceliska mushaharka alxanka.
10-kii ugu Qaalisanaa ee Corvette abid la iibiyo
Chevrolet Corvette shaki la'aan waa mid ka mid ah baabuurta isboortiga Mareykanka ee ugu caansan. Waa 'maxali ahaan laga sameeyay'…
10ka Magaalo ee ugu Qaalisan California
Gobolka Dahabka ah, Galbeedka Dahabka ah, Dhulka caanaha iyo Malabka, Dhulka Qorraxda iyo Fursadaha,…
Immisa Kaadhadhka Kirismaska ​​Ayay Tahay Inaan haysto?
Iyadoo ujeedadu tahay in la raadiyo abaal-marin ama la dhiso buundooyin credit sare ah dadka qaar ayaa soo jeedin doona lahaanshiyaha…
50 Hooyada Ugu Wanaagsan Teresa Xigasho Bixinta | 2022
Mother Teresa waxa ay ka mid tahay dadka caanka ah ee maanta lagu xasuusto wax qabadkooda bini’aadminimada. Waxay…